NAV: Dowlada oo dadka shaqooyinka laga fariisiyay arimo badan u fududeysay. - NorSom News
NAV: Dowlada oo dadka shaqooyinka laga fariisiyay arimo badan u fududeysay.
Xisbiyada siyaasada dalkan Norway ee katirsan baarlamaanka ayaa maanta isku raacay soo jeedin deg-deg ah oo ka timid dowlada, taas oo ah in 100 bilyan loo meelmariyo dowlada, si loogu caawiyo shirkadaha iyo dadka ay saameysay xanibaada dowlada ee ka hortaga caabuqa Corona-virus.
Xisbiyada dowlada ayaa ku heshiiyay in talaabooyin deg-deg ah la qaado, si looga hortago hoos u dhac dhaqaale oo saameeya shirkadaha ganacsiga iyo guud ahaan dadweynaha Norway:
Waxey xisbiyadu ku heshiiyeen:
In lacagta Dagpengerka loo kordhiyo dadka shaqada laga fariisiyay, ee horey u qaadan jiray mushaarka yar ama ka shaqeynayay shaqo aan full aheyn.
In Dadka shaqada laga fariiyay ay qaataan mushaar full ah 20-a maalmood oo ka bilowdo maalinta shaqada laga fariisayo. Kadibna ay ku wareegaan NAV oo dagpenger ka codsadaan.
Shaqada oo qofku ka shaqeyn jiray ayaa bixineyso 2-da maalmood ee ugu horeyso 20-ka maalin ee qofku uu qaadanayo mushaarka buuxa, kadibna waxaa 17-ka maalmood ee dhiman mushaarka qofka bixinayo dowlada.
Waxaa hoos loo dhigay shardiga lacagta uu qofku sanadkii hore shaqeeyay, si loogu ogolaado Dagpenger. Xiligii hore waxaa qofka laga rabay inuu shaqeeyo 150.000 kr , 12-kii bilood ee ugu danbeeyay, si uu lacagta Dagpenger xaq ugu lahaado. Hada waxaa laga dhigay 75.000 kr.
In taageerada dhaqaale ee xanaanada caruurta labo jibaar looga dhigo dadka xiligan guryaha ku hayo caruurta laga xiray iskuulada.
Lacagta canshuurta ee laga qaado shirkadaha(Moms) oo laga yareyn doono shirkadaha sanadkan 2020.
In dowladu ay 80% mushaarkii ay heli jireen ay siiso, dadka ka shaqeeyo shirkadaha ay gaarka u leeyihiin ee kaligood ku shaqeytsnaan, balse waayay shaqooyinkii xanibaada owgeed.
Xigasho/kilde: Enighet om krisepakke for næringslivet og lønnstagere. Dette er endringene.
Previous articleNorway: Booliska oo awood loo siiyay inay xiraan dadka jabiya karantiilista.
Next articleStange: Qof ayuu ku qufacay: 10.000 kr ayay boolisku ku ganaaxeen.